Tokony alainao ve na mandà ny vaksiny Covid-19 raha toa ka voatery mandoa? Ny hatao? : Martin Vrijland
Tokony alainao ve na mandà ny vaksiny Covid-19 raha toa ka voatery mandoa? Ny hatao?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 14 May 2020	• 45 Comments
Mihamivy hatrany ny olona mahita fa ny governemanta manerana an'izao tontolo izao dia te hanao fanovana maharitra amin'ny fiaraha-monina amin'ny fitambarany. Ny "fanidiana mihira" dia miova tsikelikely ho lasa maharitra mandrakizay, izay mila manaonao indray manafaka. Ny normal vaovao dia nanjary metatra sy tapaky ny fiaraha-monina ary ianao tsy maintsy mandoa izany amin'ny tenanao.
Afaka manofa mpanoro hevitra lafo vidy ianao hanoro anao ny fomba hanangananao ny orinasanao amin'ny iray metatra sy sasany ary afaka miantehitra amin'ny vidiny vidiny ianao; marika vidiny ho an'ny tenanao satria mety mila fahazoan-dàlana ofisialy amin'ny fepetrao sy ny vidin'ny vidiny ho an'ny mpanjifa ianao, satria misy olona tsy maintsy mikohaka an'io metatra tsy maintsy ilaina io sy ny fihenan'ny vola miditra.
Ankoatr'izany, ny vaksiny covid-19 ho avy dia ho adidy.
Ankoatra ny fanontaniako na efa nosedraina tsara tokoa ny vaksiny toy izany ary mitovy amin'ny fanontaniana hoe mila ny fitaovana iray sy sasany metatra mahery isika: ny governemanta dia mifono ary tena tsy mankany amin'ny vahoaka manohitra izany. mihaino.
Teknolojia no ampiasaina hanaraha-maso ireo fepetra rehetra ireo. Efa nilaza mialoha izany aho e ny bokiko amin'ny taona 2019 ary efa nilaza mialoha aho fa ao amin'ny lahatsoratra maro tato anatin'ny taona vitsivitsy. Izany teknôlôjia sy angon-drakitra lehibe izany dia haosika fotsiny, satria be loatra ny orinasa mety mahazo tombony miharihary indray. Betsaka ankehitriny izao no miasa ho an'ny orinasa lehibe izay manome vahaolana amin'ny ICT na ho an'ny masoivoho governemanta izay miantoka fa afaka manohy mandoa ny tranony izy ireo ary mitazona ny ankohonany. Mety hahita ireo olona ireo fa tsy mety ny zava-misy, saingy rehefa ilaina ny misafidy, dia misafidy ny hiondrika mba hiantohana ny fidiram-bola.
Fantatsika rehetra izao hoe ho avy izany fiarahamonina vaovao izany. Ny haino aman-jery sy fanjakana hatrany dia manohy milaza fa ilaina ny fivarotana ary ny fomba nampidirana azy dia dingana isan-karazany. Dingana isan-karazany, mba hamerenan'ny vahoaka fa mino izy ireo fa dingana ilaina amin'ny fametrahana ny coronavirus.
Handeha amin'ny onjan-drano avy amin'ny 'manamafy ny fehikibo' ka 'avelao ny lohataona mitsimoka ihany' ary avy eo ny onjam-manaraka. Ny haino aman-jery, manam-pahaizana (famokarana tarehimarika) sy politika dia haneho antsika, aorian'ny fotoana iray zatra ny iray sy sasany metatra ary trano kely kokoa hahafindra, famelomana indray ny virus corona, aorian'izay ny fampidirana ny ampahatelon'ny fonosan'ny olona. ho taitaitra.
Ireo mpamaky amin'ny haino aman-jery hafa no mazàna mitady fanazavana momba ny fomba filalaovana antsika. Te-hamaky lalina ny famakafakana momba ny fisian'ny vaksiny mampidi-doza izahay, ny fomba 5G azo ampiasaina hiatrehana anay, ny fomba hanomezan'ny patanty Microsoft anay ny taratasy fanaovana vaksiny nomerika, ny fomba nametrahana an'i Bill Gates amin'ny sehatry ny haino aman-jery sy ny vaksiny, ny fomba ampiasao ny fampiharana manampy antsika. manara-maso. Noana izahay raha misy ny fampahalalana momba ny antony itarihana antsika hiditra ao anaty tranonkala mba ahafahantsika hanozongozona ny hafa momba ny loza mety hitranga.
Tena zava-dehibe tokoa izany, satria raha tsy fantatrao izay loza mihatra aminao, dia tsy mitsangantsangana ara-potoana ianao. Na izany aza, tsy maintsy misy dingana manaraka. Mila miatrika vahaolana isika.
Eto amin'ity tranokala ity dia efa namaky lahatsoratra maromaro momba ny fomba mety hiseho any amin'ny fiaraha-monina izay tsy misy vola intsony, fiarahamonina izay misy ny fampiharana, cameras ary data be no mahafantatra ny toerana misy antsika na raha manana mari-pana tsara isika (tsy misy covid- 19) ary iza no ifaneraserantsika rehetra. Ny dingana manaraka dia ny mampifandray ireo data rehetra ity amin'ny rafitra isa. Miaraka na tsy manana isa ampy dia mety na tsy mandeha any ivelany, na lamasinina na fiaramanidina. Azontsika vinavinaina daholo aloha hatreto. Ny fifandraisan'ireo data rehetra amin'ny marika dizitaly mety azo ary ny rohy mankany amin'ny fifandanjan'ny bankinao digital dia mamarana ny tantara.
Entanina any anaty tranonkala isika ary i Shina dia manome ohatra ny fomba ahafahanao manangana fanjakana manery ny olona hanaraka azy. I Shina koa dia mampiseho ny fomba najanona ananan'ny olona manohitra ny fanoherana fotsiny. Izany no fiantraikany mandeha ho azy toy izany. Amin'ny farany, ny vahoaka dia hiankohoka eo aminy, amin'ny ampahany satria maro amin'ny fiaraha-monina ihany no miasa ho an'ny ampahany amin'ny 'rafitra'. Raha manana asa ao amin'ny ICT ianao ary manolotra rindrambaiko database na mamatsy rafitra sy fakan-tsary, raha miasa amin'ny mpanao famotorana ianao na amin'ny maha-polisy azy, dia mbola fidinao ihany ny fidiram-bolanao. Izay no tohiny.
Diso fotsiny ny milaza hoe: "Avy eo dia atsipiko ny findaiko mba hialako amin'ny rafitra". Handeha amin'ny fotoana iray izay tsy azo tanterahina ny fandraisana anjara amin'ny fiaraha-monina tsy misy digiD na tsy misy eHerkenning (ho an'ny orinasa). Toy izany koa no hitranga amin'ny teknolojia corona vaovao. Raha nanary ny findainao ianao dia tsy afaka miditra amin'ny tsena lehibe intsony.
Ho tonga amin'ny an'izany ve izy io? Dingana amin'ny dingana mety ho tonga amin'izany. Ary afaka ny ho tafavoaka velona ianao raha toa ka manana zaridaina manokana ianao, fa avy eo tsy maintsy mahazo voa avy aminao ihany koa ianao, satria ny fahonon-tena dia mety ho voarara ihany koa mandritra ny fotoana maharitra.
Ny dingana manaraka dia hoe tsy mahazo miditra amin'ny sehatra ho an'ny daholobe intsony ianao raha toa ka tsy nanao vaksiny ianao. Ary misy angon-drakitra lehibe koa handray anjara amin'izany. Raha milaza ny fampiharana anao fa nahazo vaksiny ianao, dia hidiran'ny vavahady fidirana amin'ny tranombarotra ianao; raha tsy izany dia tsia. Amin'ny dingana farany, ny fampiharana toy izany dia mety hisolo ny toetra mampiavaka izay mifandray amin'ny vatanao. Ary ho feno fotsiny izany raha toa ka mifamatotra amin'izany rehetra izany ny fifandanjan'ny bankinao. Tsy ho afa-mandositra raha tsy misafidy ny hipetraka 'any anaty', fa ho an'ny maro izay ho tetezana lavitra be.
Afaka mihoby izay tiantsika isika; afaka mikiakiaka isika fa tsy mila izany rehetra izany fa toa ny hiaka any an-efitra. Ny ankamaroany dia miankina amin'ny 'ny rafitra'. Izany no antony hanombohana hevitra momba: Raha tsy afaka mandresy ianao, dia midira.
Tsy maintsy aroso miaraka amin'ny vahaolana mivaingana izay afaka fehezin'ireo izay miasa ho an'ny 'rafitra' ihany koa. Tsy maintsy aroso amin'ny vahaolana mivaingana sy azo tanterahina isika mba hiantohana ny tsy hamoizana fahatokisana ny olona fa misy ny zavatra lazainy. Miantehitra tanteraka amin'ny fanapahan-kevitra apetraka etsy ambony isika izao. Ny rafitra politika ankehitriny dia manery antsika hanaiky ireo fanapahan-kevitra tsy misy fandraisana anjara. Azo atao amin'ny fomba hafa. Tsy maintsy hafa izany.
Misy vintana! Na izany aza, misy ny fahafahana mamadika ny zavatra rehetra amin'ny teknolojia mitovy amin'izao fotoana izao, raha tsy mila mamadika ny fiaraha-monina manontolo. Tsy mitaky fitroarana na revolisiona malaza be loatra. Ny olon-drehetra dia afaka manohy ny ataony ihany.
Ny hany zavatra miova dia ny firafitry ny fanapahan-kevitra. Ireo minisitra sy mpiasam-panjakana izay mitatitra ny satroboninahitra ankehitriny ary manery lalàna tsy misy ny faneken'ny vahoaka avy hatrany dia tokony hitatitra amin'ny vahoaka. Ny minisitra dia tokony hosoloina solontenan'ny vahoaka voafidy mivantana (izay tena misolo tena ny vahoaka fa tsy satro-boninahitra).
Izany rehetra izany dia azo atao amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny demokrasia mivantana. Amin'izany demokrasia mivantana izany dia misafidy ny solontenanao amin'ny Internet ianao. Afaka ny ho tonga mpifaninana ianao na manolotra kandidà ary ny rafi-pifidianana no miantoka ny fifidianana sy ny fitomboana ho fanohanana. Mitovy amin'ny rafi-pifidianana toa an'i Holland's Got Talent sy programa hafa amin'ny fahitalavitra. Ny teknolojia dia eo, ny mety ho eo ary dia hiasa izy.
Ny solombavambahoaka voafidy mivantana dia tokony hanatsotra ny lalàna ary manolotra izany amin'ny vahoaka ho fankatoavana na famerenana. Avy amin'ny lalàna an'arivony, hatramin'ny mazava, hatramin'ny habeny ka hatramin'ny kalitao. Handray anjara mivantana amin'ny vahoaka.
Afaka miandry isika mandra-pahafahan'ny lalàna momba ny vaksiny voafidy hahafahantsika misafidy ny hanao vaksiny na mankany am-ponja, na afaka misambotra ny fotoana. Tokony hisambotra io krizy io isika mba hitondra fiovana. Ovaho ny fomba itadiavantsika azy! Ny demokrasia mivantana dia afaka misolo ny rafi-pahefana misy amin'ny alàlan'ny rafitra mifidy an-tserasera ao anatin'ny volana vitsivitsy.
Izao no fotoana hamoronana fanohanana ho an'izany. Miankina amin'ny fotoana mety, mieritrereta momba izany, ary vakio ny fomba fiasa. Fotoana izao tokony hihetsika sy ho fanovana. Tsindrio ny bokotra hahazoana fampahalalana misimisy ary sonia ny fitakiana.
demokrasia mivantana izao
Fotoana hanaovana ny fiovana lehibe sy famerenana lehibe: sonia ny fitakiana
Azo atao ve ny mampiasa vaksiny mba hampifanarahana ny ADN?
Miantso ny rehetra: hikomy! Mpanolotsaina: Atsaharo ny fitondrantenanao amin'ny maha-olombelona tsy araka ny lalàmpanorenana!
Ahoana ny fomba hiatrehana ny fepetra coronavirus (fanidy): torohevitra azo ampiharina
Tags: noho ny, Apps, lehibe, Covid-19, tahirin-kevitra, demokrasia, mivantana, er, Featured, fvvd, mitranga, Manda aho, -tserasera, fifidianana, teknolojia, vaksiny, vaksiny, Adidy amin'ny vaksiny, fanoloran-tena, Wat, kororoky, fandavana, lalàna
14 May 2020 amin'ny 12: 22
14 May 2020 amin'ny 13: 16
Fa i Martin dia maimaimpoana, manana andraikitra mpisava lalana i Jan Peter
Ny praiminisitra teo aloha Balkenende dia mila vaksiny corona maimaimpoana ho an'ny rehetra
14 May 2020 amin'ny 13: 26
Salama sambatra, tsara amin'izay ary tsy misy mahasahy azy.
Malalaka = avy amin'ny varotra hetra ary noho izany dia amin'ny alàlan'ny fiakaran'ny hetra = tsy maimaim-poana
17 May 2020 amin'ny 15: 23
Gimendramana fa miakatra eto Madurodam ity, tsy ho ela raha misy ny fanalefahana faobe noho ity areti-mandoza ity dia ny raim-pianakaviana dia ho an'ny rainy. Ampy ho an'ny mpanamboatra asa maloto ...
Michael Gove dia manambara tracer fifandraisana 17,000 mahery avy amin'ny coronavirus nalaina am-bavany ankehitriny - menatra fotsiny 18,000 XNUMX no lasibatra - na dia nilaza aza izy ireo fa telo volana monja no nokaramaina azy ireo.
14 May 2020 amin'ny 13: 23
Covid, noho izany dia mijoro ho an'ny taratasy fanamarinana momba ny vaksiny (2020)
14 May 2020 amin'ny 13: 33
Omeo azy ireo rantsan-tànana, hoy TSIA
14 May 2020 amin'ny 14: 41
Ny 19 ao ambadiky Covid dia mijoro ho an'ny AI, raha adika ho isa ny tarehinao. Koa fanamarinam-pahalalana momba ny vaksiny ny fahaizana manan-kery.
Azontsika atao ny maminavina hoe aiza ny faran'ny nangalatra nangalarina, ny rafitra Palantir mazava ho azy! Làlana sy lalana
14 May 2020 amin'ny 15: 33
@riffian Tena marina !!! AI dia mila data famahanana ahina, oh nangalatra eny marina e!
Mila valiny maika momba ny fifanarahana data NHS COVID be dia be isika
Fa maninona ny governemanta UK no mandà ny hamoaka ny antsipirihany momba ny famindrana angon-drakitra momba ny famindrana angon-drakitra tsy mbola nisy hatrizay ho an'ireo goavambe amerikanina? Raha tsy mahazo valiny isika dia mety hitady azy ireo eny amin'ny fitsarana.
Future nanoratra hoe:
14 May 2020 amin'ny 14: 58
Lahatsary mahafinaritra, indrindra fa ity farany no famaranana amin'ny AMINY, mamaky tanjona, no tanjona. Ny tarazy matetika manosoka ireo teny.
Eto dia ho an'ny mpamaky vaovao ihany. Soa ihany fa mitombo hatrany. Manome fanomezana izay manampy an'i Martin isan-karazany ihany koa ny olona. Ny feony dia mazava sy azo itokisana. Tsy mamaky an'io any an-kafa ianao. Ny tranonkalany dia tsy maintsy tazonina eny amin'ny rivotra. Jereo ny lahatsorany momba ny fanafihana Ddos ao amin'ny tranonkalany
Izany dia tena masiaka kokoa noho ny horonantsary nofafazan'i Jensen 33. Izay, mazava ho azy, dia nifanaraka tamin'i Yt. Miaraka amin'ny amidy ny akanjony, ary avy eo dia milaza fa ho marina izany. Mipetraka any Vondelpark izy, ary manana vola toy ny rano. Amboako ny raharaha.
Jereo ihany koa ny hoe matetika i Jensen dia miresaka momba ny kiraron'ilay miaramila eo amin'ny tendany.
Ary eto indray ny fampatsiahivana ny antony tokony handraisanao tena io fitifirana io. Raha mianatra eto toy ity eto amin'ity tranonkala ity ianao dia mahazo fahalalana maromaro. Fantatrao ve fa tokony tsy tokony hino ny zavatra rehetra voatonona isa ianao. Ary aza avela hiditra ao amin'ny vatanao izany.
XanderN nanoratra hoe:
14 May 2020 amin'ny 18: 34
Miombon-kevitra. Tsy mahita ny zavatra rehetra nosoratan'i Martin na natolotry i Martin, indraindray mahita fa somary tafahoatra na tsy misy dikany izany, fa miaraka amin'ny feony somary tsy manam-paharoa dia izy no ohabolana 'canary' ao amin'ny toeram-pitrandrahana arintany 'ny fahalalahana maneho hevitra any Holandy. Noho izany, ity tranokala ity dia mila mijanona sy mihazakazaka, ary tokoa: ny mpitsidika sy mpanohana, ny tsara kokoa.
Ao amin'ny lahatsoratra etsy ambony dia saika manaiky aho na dia mbola mino aza fa ny fanovana naroso dia tokony hiparitaka mandritra ny fotoana lava kokoa (raha te hahazo olona betsaka araka izay azo atao ianao, ary tsara kokoa amin'ireo firenena hafa). Ny olona aloha dia tsy maintsy atao hoe ‘masaka» ho fanodinana mahatsiravina toy izany. Raha tsy izany, maro no tezitra, hiaina herisetra, korontana, fahantrana ary tsy izany no tanjona.
Ampitahao amin'ny olon-kafa izay mihamangatsiaka ny tongony amin'ny -30 degre amin'ny ririnina Swedish. Raha mametraka azy avy eo ao anaty mando mafana ianao dia hamboarina ny fahavoazana. Mila mandeha tsikelikely, ary toy izany koa amin'ny ankamaroan'ny olona. Omeo azy ireo 10 taona hanaovana izany (na dia matahotra aza aho fa tsy manana 10 taona hisorohana ny lalàna momba ny martial ankehitriny ho lasa fanjakana polisim-pirenena).
14 May 2020 amin'ny 20: 33
Hitako fa tsy mendrika ny feon'ny fieritreretan'ny 'tsy mitombina' sy ny "tafahoatra". Raha toa ka misy antokony iray tsy mitombina ary tena sahirana, dia governemanta ny fidiana.
Tsy ny hevitr'i Xander eto amin'ny tranokala no isaina ary refy amin'ny fitsaram-pinoana ataonao Andriamanitra X. Fotoana izao hampitsaharana an'io karazana tsikera io ary mandray andraikitra. Aoka ny fanovana amin'ny fanaovana.
Mino mafy aho fa tokony hapetraka ao anatin'ny volana vitsivitsy ny rafitra vaovao natolotry ny fvvd.nl. Tsy manam-potoana handaniany isika.
Laviko mafy ny hevitrao. Raha miandry volana vitsivitsy isika, ny kabinetra ankehitriny dia nanova ny fiaraha-monina iray ho iray sy sasany metatra eo amin'ny fiarahamonina ary ampiharina ny karazana teknolojia rehetra izay mametraka antsika ao anaty tranonkala fitantanana totalitaly.
Ka hoy aho hoe: aza asiana lalana lavitra ary ario tsy matotra sy tsy mitanila. Masiaka loatra ary tsy mitombina ny fitohizanay sy ny fanoratana lahatsoratra izay tsy mety rehetra ary ny voka-dratsin'ireo vaksiny sy nomerika manimba antsika.
Mampalahelo ny mametraka azy amin'ny fahamatorana ny vahoaka. Tsy vonona ny olona ho amin'ireto fepetra fanalahidy ireto ary hitantsika izao fa ny governemanta dia manery ny fepetra ‘tsy mivoatra’ ary 'tafahoatra' ao anatin'ny herinandro vitsivitsy.
Ka hoy aho hoe TSY henjana loatra amin'ny tsikera ataonao ary manoro hevitra ny hiantsoan'olonao ianao Manaova hetsika IZAO. 1 minitra 12 ka tsy afaka miandry 10 taona isika.
Azonao atao ihany ny mametraka fanontaniana ao amin'ny fizarana fanontaniana sy valiny ao amin'ilay tranokala: https://www.fvvd.nl/qa/
14 May 2020 amin'ny 22: 14
Rose nanoratra hoe:
15 May 2020 amin'ny 07: 03
Ireo mpanasitrana malefaka dia manao ratra maimbo…
Milazarina ihany ny olona, ​​fa toa miraitoka ry zareo.
15 May 2020 amin'ny 16: 01
Hitako fa milamina tsara ny valin-teninao amin'i Xander na dia matoky tena aho fa tsy mahomby i Xander. Tsy te hanazava an'izany aho. Ilay mpamaky mahazatra dia mety mahafantatra ny tiako tenenina.
14 May 2020 amin'ny 13: 37
14 May 2020 amin'ny 15: 01
Hafahafa be ny mbola tsy nahita an'io clip io, tsy mbola namaky fahitalavitra ary nampivadika ny volony ilay CD. Tena tsy dia mahay manandanja fotsiny. Ary koa mpankafy an'io mozika tarika io. Tamin'ny andro taloha.
14 May 2020 amin'ny 13: 56
Fandaharana mialoha kokoa, ny script dia efa nampidirina tao anaty andiany maty - PLAGUE tamin'ny 2003
14 May 2020 amin'ny 15: 47
Clip idd manan-danja eo aza dia misy resaka momba ny corona (ra33oon), nidina tamin'ny taona 1993 miaraka amin'ny ahiana ho douglas mahazatra dia hafa amin'ny ur ur.
olona am-polony maro tsy ilaina intsony.
14 May 2020 amin'ny 14: 06
Ny saranga antonony / kilasy antonony dia hohotorina tanteraka ara-bola mandritra ny herintaona farafaharatsiny, mba hahafahan'izy ireo atsy ho atsy ho an'ny Fanjakana State toy ny zanak'ondry.
14 May 2020 amin'ny 15: 09
Eny tokoa. Amin'izany fomba izany no mahatonga ny olona rehetra hiankina tanteraka. Tsy mieritreritra zavatra manjary intsony satria voavonjy io. Voavonjy ihany amin'ny fomba toy izany aho mieritreritra fa mety ho tsara kokoa ny lanitra ianao. Ary avy eo ilay mpamonjy anao ihany koa no nanosika anao sy ny ankohonanao ho any amin'io lavaka io. Fa amin'ny voalohany no hahita azy io amin'ny voalohany. Mandra-tara dia tara, rehefa afaka izany, ny vaksiny dia mety efa tsindrona ho an'ny olona any amin'ny firenena tsy voatonona na ahoana na ahoana. Avy amin'ny ahiana mahazatra, ary nandamina tsimatimanota ho an'ny tenany manokana. Raha manimba anao amin'ny fomba rehetra ny vaksiny ity. Izany fandaharana izany no tena mitantara ny tantara manontolo.
14 May 2020 amin'ny 15: 28
Eto dia misy amboadia iray amin'ny fitafian'ny ondry Eric Schmidt, ireo voarohirohy matetika dia voarohirohy amin'ity asa fanandevozana farany ity. Ary misy ihany koa ny firafitry ny climatic ao amin'ny fandaharam-potoanany rehefa sahirana izy ireo
Mifandraisa amin'ny Tracing Group voavidin'i Soros sy Gates, ao amin'ny serasera i Has Chelsea Clinton
'tokony ho' mankasitraka 'izahay amin'ireo orinasam-be goavambe izay' tia ny manaratsy ny olona '(Antsoinay fa FASCISM ity)
Nafeninay ilay horonan-tsary, dia ny fomba fiasan'izy ireo.
14 May 2020 amin'ny 15: 37
https://www.cbsnews.com/news/trump-economic-club-speech-live-stream-president-trump-at-the-new-york-economic-club-today-2019-11-12/ (I Trump dia ao anatin'ny olana, adino ny Q bullshit !! Matokia ny drafitra, no tanjon'izy ireo)
14 May 2020 amin'ny 17: 20
I Trump dia mankasitraka ny vaksiny, jereo ny fomba namalian'ny hetsika Q azy.
15 May 2020 amin'ny 16: 41
TOROHEVITRA: ny 'drafitra' an'ny vavahadin'i pandrefesana nataon'i Trump izay notaterin'ny sekretera mpanao gazety tamin'ny mpanao gazety dia notanterahina tamin'ny tatitra momba ny ady izay nohazoniny ihany koa - izay nampitandrina ny tsy fahampiana ara-pitsaboana, ny tsy fahampiana ara-bola ary ny fisavoritahana federaly volana vitsivitsy talohan'ny fipoahana.
20 May 2020 amin'ny 18: 50
izao dia manomboka azoko tsara kely kokoa ...
MEDIA IGNORES ISRAEL CONNECTION TO ERIC SCHMIDT'S PUSH NY NY "SMART CITIES"
14 May 2020 amin'ny 15: 46
Jereo eto ny fomba ananan'izy ireo ny lalao. Asehon'izy ireo fotsiny izay hataony. Vakio ny ankizy amin'ny fianakaviana. Eo ambany fitantanan'ny fahasalamana, ary satria tsy manana efitrano lua ho an'ny quantine ianao. Fa asaivo misy milaza aminao hoe iza no nanohitra azy io. Ary manome fihetsika tsy dia tsara loatra. Fa misy manana isa nomanina iray, antsoina hoe mifampiahy. Ary noho izany ny nomeraon'izy ireo ny tarehin-taratasinao. Eny, ny zanakao dia mety tsy hahita anao intsony, ary tsy maty avy any Covid izany. Text 2, vakio ny 80123 sy 9. ary ario daholo izay anananao. Ataovy tsara ny Amerika …… ..
Jereo fotsiny ilay artista, dia ho hitanao eo ny fidiran'izy ireo.
14 May 2020 amin'ny 16: 31
Ny fanoloran-tena amin'ny fanekena ny Tontolo Vaovao
14 May 2020 amin'ny 21: 56
15 May 2020 amin'ny 03: 25
Izay rehetra nifidy ny fiainany dia tokony hanao sonia ity fitakiana ity. Azontsika jerena mazava izao ny zava-mitranga rehefa mamela ny saribakolin'ny fahitalavitra mifehy ny fiainanao ianao. Raha mba manintona fotsiny dia miankina amin'ny lainga izany, araka ny vakiana amin'ity lahatsoratra ity. Manampy antsika ho lasa fanakatonana koa ny fifidianana.
Azo antoka fa tsy maka sombi na vaksiny aho, fa mandrara. Na ahoana na ahoana, tsy maintsy miverina amin'ny natiora isika raha te hahita ny tenantsika. Na i Jesosy aza dia tsy maintsy nandeha nankany an-tany efitra hifandray. Tsy milaza aho fa mila mino an'i Jesosy ianao, milaza fotsiny aho fa eo amin'ny lalana iray ihany.
15 May 2020 amin'ny 06: 30
Tsara fa mbola misy ny dokotera toa an’ity dokotera Alemanina ity https://www.youtube.com/watch?v=6bIAXtciwk0&feature=youtu.be
15 May 2020 amin'ny 06: 59
Ao amin'ny horonan-tsarin'ny dokotera Alemanina ao amin'ny rohy teo aloha dia nilaza izy hoe inona no marina.Ao anaty vetaona milaza fa TSY tokony hiverina amin'ny "normal" isika. Tena marina izany, satria midika izany fa ny taloha dia nahatonga ny olona hanodinkodina antsika amin'ny toe-javatra iainantsika ankehitriny. Noho izany dia misy filana ara-dalàna vaovao, izay tsy ilay fiaraha-monina 1,5 metatra miaraka amin'ny teknika fanaraha-maso rehetra, fa ny normal vaovao izay mifanitsy amin'ny FVVD Martin. Angamba azo ampidirina ao amin'ny hafatry ny FVVD izany?
15 May 2020 amin'ny 09: 48
Mino aho fa mazava be ny hafatr'i Martin!
15 May 2020 amin'ny 08: 18
Farafaharatsiny ho ahy "ho any amin'ny tsy mandeha ho azy". Vantany vao lasa fanjakana feno halotoana isika dia amboariko ny fananako ary lasa aho. Aleoko maty mosary any an-toeran-kafa eo afovoany nefa tsy avela hesorina ny fahalalako.
15 May 2020 amin'ny 09: 47
Tsy mino aho fa afaka mandeha ianao rehefa eo ny toeran'ny polisy feno. polisim-panjakana = rafitry ny feom-pinoana, ampahany amin'ny fanjakana ianao. Amin'ny rafitra feodaly, ny mpanompo dia tsy afaka ary tsy tokony hanao na inona na inona raha tsy nahazo alalana avy amin'ny tompon'ny fanjakana / fanjakana.
Ambonin'izany, aiza ianao no te handeha handeha amin'ny zava-drehetra iraisam-pirenena, atambatra sy fehezin'izy ireo. Manontany tena aho raha miandry anao ny mponina tianao. Eo ihany koa ny fifaninanana eo amin'ireo olona tsirairay. Miatrika raharaha sarotra isika ary noho izany dia mila mamaha izany isika eto Madurodam. Ny mponina amin'ny ankapobeny dia mbola tsy mahatakatra izany amin'ny fiterahana maharitra mandrakizay.
16 May 2020 amin'ny 10: 51
Eto Martin dia marina ianao momba an'io fikorontanana io, ary indrindra ny vokatr'izany chimeric.
Patent vaksiny Coronavirus https://patents.justia.com/patent/10130701 ho an'ny Attenuated Coronavirus hampiasana vaksiny. Chimera Protein Patent https://patents.justia.com/patent/8828407 Chimera Lion lohany, vatana Goat, Dragon tail "She-Goat" dia midika ara-bakiteny hoe "Vanim-potoana ririnina" aka Capricornus ny Voromahery Saturnian amin'ny ririnina; Chimera dia biby mahafaty izay noforonina tamin'ny biby hafa, izay atao hoe Vaccine iray.
Ary ny fizarana farany dia avy amin'ny fampianaran'ny Freemasons sy ny gazety. Amin'ny teny hafa dia mila mamaly haingana isika. Noho izany dia ahitanao izay azon'ny olona mivoaka avy amin'ny lahatsoratrana misy marika. Koa zavatra mampidi-doza sy avelao, te hamono anao izy ireo ary hamorona tontolo vaovao ho an'ny tenany. Ahoana ny fomba nahitan'ny afobe olona maro an'io fampianarana io.
Ny induvidual dia voatsindrona amin'ny alàlan'ny tsikombakomba.
Mahatalanjona loatra izy ka tsy afaka mino fa io dia miavaka.
Sodoma, Pedophille, 33 Freemason. J Edgar Hoover
Direkta FBI, inona ny firaisana tsikombakomba?
Izy koa dia miresaka momba an'i Gileada, ilay mpanao vaksiny. Izay amin'ny teny hebreo dia Galeed.
Vakio ny antontam-bava mitory anarana iray mpitsara mitovy amin'ny Galeed ao amin'ny hebrew. Samy manamarika ny faritry ny fifanekena. Teo anelanelan'i Jakôba sy i Gen 31:47 (izany dia ilazana ny manaraka azy ireo, tsy hahazoana olona baoby iray)
Laudato mpanao (fampianarana fampianarana) dia niantso ny famonoana olona 6 miliara.
Jereo fanazavana: Ary izay toa tadiaviny ho tanterahina. Toa niantso ao amin'ny tafika koa i Trump mba hanao vaksiny ny rehetra, mamaky maty. Ary i Amerika, manana fitaovam-piadiana tsy miankina 400 tapitrisa eny an-tanany, dia mbola mitoetra mangina. Mahagaga fa afaka mahazo fepetra toy izany ianao. Ary tsy mandratra ny herisetra aho. Fa ny ahiana mahazatra dia tena manao izany.
17 May 2020 amin'ny 12: 21
Izaho koa dia mandà ireo fitsapana ireo, satria izy ireo koa dia afaka mameno ny angon-drakitra ADN. Die Schippers dia eo amin'ny DSM izao ary ny lehiben'ny DSM Sijbesma taloha no tompon'andraikitra amin'izao fitsapana izao. Jereo ny fihazakazahana ny hares, ny mpilalao mahazatra dia milalao amin'ny andaniny roa, mifohaza !!
Vita ny dihy seza
17 May 2020 amin'ny 18: 21
Mbola manana namana namana izy, maharikoriko… ... Tena tsara fa nohazavaina tamintsika tao amin'ny 13.33 minitra. Endrey ny halehiben'ny krizy izay? Ary tena mamy ny mpanompo. Mampalahelo fa ny andevo matetika dia olona voan'ny fieritreretana. Tsy afaka milaza an'ireo mpisehatra rehetra ireo aho.
17 May 2020 amin'ny 14: 29
Fa maninona no vaksiny raha be loatra ny fanafody manohitra ny gripa?
IZAO no nanolotra kolikoly $ 20M Ho any Poison COVID-19 Cure - Filohan'i Madagasikara
Nosoratan'i GreatGameIndia -May 16, 2020
Tao anatin'ny fandrosoana nanaitra ny Filohan'i Madagasikara dia nanao fanambarana mahatsiravina fa ny WHO dia nanolotra kolikoly $ 20m ho an'ny poizina COVID-19. Ny fanafody rongony antsoina hoe COVID-19 Organics vita avy any Artemisia dia mahasitrana marary COVID-19 ao anatin'ny folo andro hoy ny Filoha.
18 May 2020 amin'ny 13: 33
Any Nizeria, eo ambany fitaratra lehibe ny fotodrafitrasa billy gooses taorian'ny fiampangana kolikoly, dia nandroaka ny OMS / melinda sy ny volavolan-dalàna i Burundi sy Tanzania. Noho izany koa azo atao, dia afaka maka ohatra eto isika.
18 May 2020 amin'ny 18: 05
Mbola manohy gaga amin'ny BMF aho. Ary indrindra indrindra dia be dia be ny olona miaro azy ireo ny nify sy ny hoho. Satria manome fiantrana be dia be izy. Raha farafaharatsiny dia miverina amin'ny famatsiam-bola 80% farafaharatsiny izy. Raha tena mamy i Bill, dia afaka namonjy an'izao tontolo izao avy amin'ny hanoanana sy ny hetahetany i Bill sy ny namany. Raha tokony hilalao fizarazarana sy fitondrana eo amin'ny sehatra fitsapana azy manerantany. Tsy izy ary mampiasa olombelona ho biby fitsapana. Tokony mbola ajoro ihany ny olona. Manam-bola be izy ireo, afaka manamboatra ny fahaterena rehetra eto amin'izao tontolo izao ao anatin'ny herinandro. Tsy noana ny hetaheta, tsy kely loatra ny ady amin'ny fahafatesan'ny ankizy sns .. Nefa tsy manao an'izany izy ireo, ka tsy misy mahasoa ny BMF iray manontolo. Fiantohana ny karazana ambany indrindra, indrisy fa ny vola indrindra.
20 May 2020 amin'ny 08: 46
Manontany tena aho raha nanipy ny modely Imperial College ireo RIVM, satria tsy misy olana. Fanaporofo bebe kokoa aza izany fa angon-drakitra namboarina hanohanana ny fandaharam-potoana manokana:
Ny ady Corona-Modellierung "schlimmster Software-Fehler aller Zeiten"
Benachrichtigung über neue Article:
Die Modellierung des Imperial College amin'ny zotra Corona-Epidemie, auf der umfangreich Maßnahmen und Verbote beruhen, rindrambaiko goavambe-Fehler auf, sagen zwei weltweit führende Daten-Ingenieure.
20 May 2020 amin'ny 10: 46
adala ve ianao, ireo modely ireo dia tsara loatra hanariana ny "IT WOBBLES"
RIVM: laharana famokarana 'wobbles' eo anelanelan'ny 0,7 sy 1
20 May 2020 amin'ny 13: 42
hahahaha idd ny Wuhan Wiggle mba ho marina.
23 May 2020 amin'ny 15: 43
« Ny famaritana vola lehibe mandritra ny krizy corona dia mitarika amin'ny hyperinflation: ny bitcoin ve no vahaolana?
Mamatotra an-taonina maro ny fatorana amin'ny raharaham-panjakana, Jordie Zwarts, saingy tsy mahavita na inona na inona »
Total fitsidihana: 2.522.829
Ny Corona Crisis Covid-19 dia mampahatsiahy ny tsimok'aretina MS Blaster tamin'ny 2003 izay nihaza an'i Bill Gates
Ny herin'ny fanovana dia manomboka amin'ny fametrahana ny tahotra, ny fandaharana ary ny tsy fahitana diso ary mivadika ho tena revolisiona
iPhone dia manafina ny fampiharana covid-19 farany amin'ny fanavaozana i-OS 13.5 farany
I Maurice de Hond dia mahita ilay valiny tsy misy dikany (video) iray metatra sy sasany
Firifiry ny Holandey no mbola afaka mandoa ny volany mandritry ny krizy corona?
Zonnetje op Ny Corona Crisis Covid-19 dia mampahatsiahy ny tsimok'aretina MS Blaster tamin'ny 2003 izay nihaza an'i Bill Gates
mari-toerana op Ny Corona Crisis Covid-19 dia mampahatsiahy ny tsimok'aretina MS Blaster tamin'ny 2003 izay nihaza an'i Bill Gates
Fandrahonana baomba op Ny Corona Crisis Covid-19 dia mampahatsiahy ny tsimok'aretina MS Blaster tamin'ny 2003 izay nihaza an'i Bill Gates
Camera 2 op Ny herin'ny fanovana dia manomboka amin'ny fametrahana ny tahotra, ny fandaharana ary ny tsy fahitana diso ary mivadika ho tena revolisiona
bounz op iPhone dia manafina ny fampiharana covid-19 farany amin'ny fanavaozana i-OS 13.5 farany